Emmanuel Macron, mampitombo ny fitsoahana mandritra ny diany, mahita ny farany
Hatramin'ny nanombohan'ity taona ity dia niatrika fahasahiranana maro i Emmanuel Macron. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy maintsy niatrika toetr'andro ratsy i Frantsa izay nanimba ny zavatra rehetra tamin'ny lalany. Ary ny priori ity no onja voalohany ihany.
France amin'ny endrika ratsy
Nanimba departemanta sasany tokoa io toetrandro ratsy io. Fanimbana ara-materialy miaraka amin'ny tolona olona mavesatra. Raha ny marina dia nisy ny fianjeran'ny orana mitovy amin'ny herintaona. Ny antony nialan'ireo renirano tamin'ny fandriany noho izany fiakarana tampoka tao anaty rano izany. Hitan'ny olona fa voafandrika ao an-tranony izy ireo ary misy aza tsy hita.
Mampalahelo fa eo amin'ireo tsy hita popoka dia misy mpamono afo roa izay niezaka nanavotra ny namany. Noho izany, nirohotra ny governemanta hanampy ny ampahany amin'ny vahoaka izay mandà.
The King of Bamoun, His Majesty Ibrahim Mbombo Njoya in auditors at…
Ho lavo tsy ho ela ny profesora Owona Nguini
Mandoa onitra ny mpikatroka kongoley iray i Frantsa satria ...
Vokatra navoakan'i Emmanuel Macron izay nahasarika ny mason'ireo mpampiasa internet
Raha ny marina, mba hamoahana ny vola fanampiana ho an'ny mponina dia ilaina ny manasokajy ity tafio-drivotra Alyx ity ho toy ny loza. Afaka nanampy ireo tra-boina araka izany ny governemanta. Ankoatr'izay, tonga tany an-toerana ny filohan'ny Repoblika Emmanuel Macron mba hanome toky ny olona ny amin'ny ho avy. Saingy tratry ny fahatokisan'ny mpamily kamio izy.
VAKIO IZANY: Singa vaovao hita tsy ho ela dia hanazava ny fahafatesan'i Victorine
Eny tokoa, ity farany dia nanambara taminy fa vao avy nantsoina izy hanampy volamena; tsy nanana permis intsony izy. Ka manontany ny hevitry ny filoha ny mpamily: inona no tokony hataoko? Saingy ny valintenin'ny filoham-panjakana dia nahagaga olona mihoatra ny iray. Raha ny marina dia nanoro hevitra azy i Emmanuel Macron mba tsy hiteny na hitantana na hitantana. Valiny tsy mendrika izay mandrisika ny olona tsy hanaraka ny lalàna. Teny izay tsy tokony holazain'ny filoha mihitsy.
Johnny Depp hatsatra sy mahia - Manahy i Vanessa Paradis taloha - Video
The King of Bamoun, His Majesty Ibrahim Mbombo Njoya amin'ny mpijery miaraka amin'i Obiang Nguema
Nandoa onitra ny mpikatroka kongoley iray i Frantsa satria nisambotra artefact iray avy ...
Ity misy fomba ahafantarana hoe iza ireo firenena manao ny tsara indrindra manoloana an'i Covid